जिन्दगी हिउँभन्दा उज्यालो मन « Karobar Aja
जिन्दगी हिउँभन्दा उज्यालो मन
deepshikha Sharma प्रकाशित मिति : 14 April, 2017
“जीवनलाई लाई यसै अर्थमा बुझ्ने र अप्ठेराहरूलाई सहज र स्वभाविक मानिदिने हो भने दुःखको दलदल भनिरहनु पर्दैन”
उकालो ओरालो र गल्ठ्याङगुल्ठुङ बाटोमा मथ्न लागेको दही बनेका छौँ यात्रुहरू । समरबाट एक घण्टा गाडीमा गुडेपछि सडक टुङ्गियो । अब पारिको गाडीबाट जानुहोस्, हाम्रो यहीँसम्म हो’,कन्डक्टर कुर्लिए । आआफ्ना सिरिखुरी बोकेर पन्ध्र मिनेट ठाडो उकालो र पाँच मिनेट ओरालो गोरेटो कुदेपछि मात्र बल्ल भेटियो हामीलाई लिन गएको गाडी ।
हामी झोला झ्याम्टा बोकेर अघि अघि कुद्यौँ । मधुजीलाई लेक लाग्यो अलि अलि । ग्वाम्लाङ्ग अनुहार छोपेर स्यानो झोला बोक्दै उकालो चढिरहनुभयो उहाँ । ‘हजुरको अनुहार त क्षणमै बच्चा जस्तो, क्षणमै तरुनो जस्तो, क्षणमै वृद्ध जस्तो देखिन्छ’,के हो यसको राज ? हाँस्नुभयो अर्का मित्र । ‘उहाँमा रूप परिवर्तन गर्ने जादुई क्षमता छ क्या’,मैले जवाफ फर्काएँ । उहाँ फिस्स हाँस्नुभयो मात्र । सायद लेक लागेको असर ताजै थियो । हामीअघिल्तिर केहीबेर अघिसम्म कालो देखिइरहेको पहाड सुनौला बनेर घामसँग छिल्लिँदै थियो । उः त्यो पहाड जस्तै हो मधुजी पनि’ मैले भनेँ । उहाँको मुस्कानले होला पहाड झन् गुलाबी देखिन थाल्यो । साइँसुइँ सुइँ गर्दै बहेको वायुले छरिरहेछ अनन्त सङ्गीत पहाडका कित्ता कित्तामा । बिच बिचमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले यातायात समितिले नै गाडीको बन्दोबस्त गरेको रहेछ । भारतीय सीमाबाट पचासौँ ठाउँमा पल्टी गर्दै सिमेन्ट पाल्पा पुगेझैँ गाडी भेट्दा, उक्लँदा ओर्लदां र सिट ओगट्दा ठुलै विजयको भान पर्दो रहेछ यात्रुलाई ।
रित्तो गाडी र हामीलाई बोकेर लैजाने गाडीका चालक बिच भेनामा झगडा भइरह्यो । हामीले होटल साहुनीलाई खाना बनाइदिन आग्रह ग¥यौँ । बहिनीले पन्ध्र मिनेटमै आलु, टिमुर अचार, दाल, भात खुवाइन् । खानाको प्रति व्यक्ति रु. दुई सय मात्र । त्यति विकट ठाउँमा त्यो निकै सस्तो हो । यात्रामा हिँड्दा खानेकुराहरू भेटेको ठाउँमा खाइहाल्नु राम्रो हुन्छ । आफुले लगेको खानेकुरा बचेकै बेस ।
गाडी रफ्तारमा कुदिरहेछ । पहाडहरू जतासुकै नाङ्गा छन् । छर्लङ्ग देखिनु, नाङ्गो छामिनु हो क्यार । देखिनेजत्ति सबै देखिनु, नाङ्गो हुनु हो क्यार । आँखाको दृष्टिले सत्य देखिन मद्दत गर्छ, जिब्राले सत्य स्वादको आस्वादन गर्छ, कानले आवाज अनुभूत गर्छ, छालाले स्पर्श अनुभूत गर्छ, नाकले गन्ध ठम्याउँछ । ज्ञानेन्द्रियहरू नहुँदा हुन् त सत्य अनुभूत हुँदैनथ्यो संसारको । साँच्चै दोस्रो वस्तुले नछोपिएपछि पो सत्य खुल्छ । सत्य नाङ्गो हुन्छ । जीवन पनि त एउटा नाङ्गो क्रम हो । नाङ्गो जीवनलाई ढाकछोप गर्दागर्दै दुःखको भुमरीमा फसिरहेछ मान्छे । नाङ्गो पहाडहरूमा उबडखाबड छन्, मोड, भिर र समस्थलीहरू छन्, रङ्ग र वायुका रसिला सङ्गीतहरू छन् । जीवनलाई ।